Lalana simba eny « Coum » : Roa lahy nadoboka am-ponja noho ny fakàna vola tsy ara-dalàna
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2019 → mai → 4 → Lalana simba eny « Coum » : Roa lahy nadoboka am-ponja noho ny fakàna vola tsy ara-dalàna
Ny talata lasa teo no nidina teny ireo mpitandro filaminana, nanome fampitandremana ireo olona maka vola amin’ny lalana simba eny amin’iny faritra 67ha iny. Mbola nanohy hatrany anefa ireto roa lahy ireto hany ka tsy maintsy nosamborina avy hatrany ary nadoboka am-ponja.
Lalana iray mampitohy an’i « Coum » 67ha iny mivoaka aty amin’ny lalam-baovao Ankasina ilay izy! Raha ny angom-baovao azo mantsy dia lasa ataon’ny sasany fitadiavam-bola ilay lalana tapaka eny an-toerana, manandrify ny tranombarotra lehibe iray mpivarotra fanakana. Lakan-drano lehibe velarana manapaka ny arabe izy io, tsy voadikan’ny fiara akory. Tsy misy fampilazàna ihany koa aty aloha hany ka rehefa tonga eo ny mpitondra fiara vao zendana : tafalatsaka anaty fandrika. Eo no tonga amin’izay ry zalahy mpaka vola, mivimbina takelaka hazo anakiroa efa vita rafitra natao ho solona tetezana. Mazava ho azy fa tsy maimaim-poana akory iny fa tsy maintsy mandoa vola ireo mpampiasa lalana. Tonga teny am-poto-tsofin’ireo mpitandro filaminana izany fitakiana vola tsy ara-dalàna izany ka dia nilatsaka teny an-toerana izy ireo ny voalohandohan’ny herinandro teo, ary nampitandrina ireo roa lahy amin’izany fomba ratsy izany. Mbola nanao ny fanaony ihany anefa izy ireo. Ny alakamisy teo no tonga nisambotra ireto farany ny pôlisy ary mbola tratra teny aminy ny sakaosy kely feno vola. Nentina natao fanadihadiana izy ireo ary fantatra tamin’izany ihany koa, araka ny fanazavàna azo, fa isan’ny naman’ireo mpanimba lalana izy ireo mba hahafahan’izy ireo mitaky vola. Natolotra ny Fampanoavana omaly moa ireo roa lahy ary nadoboka am-ponja vonjimaika izao.
Efa maro tokoa raha ny fanamboarana natao tamin’io lalana io saingy ny eo ihany no eo. Voalaza moa fa tsy tokony handehanan’ny fiarabe ilay lalana kanefa dia maro ireo minia mandika izany ary ny niafaràny dia nanjavona tsy hita mihitsy ireo sarona lakan-drano simba. Vokany, tapaka ny lalana ary tsy vitsy ireo fiara no « nijoboka » teo ! Na tamina tambajotra sosialy na tany amin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny avy dia fantatra fa maro ireo fitairanan’ireo mpampiasa lalana saingy toa tsy misy valiny hatreto. Asa inona re no andrasana e ? Manantena valiny mahafapo sy fandraisana andraikitra faran’izay haingana araka izany izy ireo.